कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथपिने ! – Halkhabar kura
२४ भाद्र २०७७, बुधबार २१:२८
कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथपिने !
काठमाडौं / नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथपिने निश्चितप्रायः भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई नि’रन्तरता दिने पक्षमा नभएपछि कार्यकाल नथपिने भएको हो । कुलमानको कार्यकाल थप्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द’बाब दिइरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्ड निकटकै भएकाले पनि उक्त मन्त्रालयसम्बन्धी प्राधिकरणमा आफूले भनेको व्यक्तिमै निर्णय हुनुपर्ने पूर्व माओवादी पक्षधरको दा’बी रहेको छ । त्यसैले सम्भवतः भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे प्रस्ताव लाने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुलमानको नाममा सहमति जनाएका छैनन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीले पटक पटक एकैजनालाई मौका दिन नहुने तर्क राखेका छन् । उनी कुलमानको कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट छैनन् । काम भन्दा हल्ला गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारमाथि द’बाब बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको टिम नै असन्तुष्ट बनेको छ ।
प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच मतभेद कायमै छ । आज बालुवाटारमा यसबारे पनि कुरा उठेको बुझिएको छ । भोलि बस्ने क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै न कुनै निर्णय लिने सम्भावना छ । कसैलाई नियुक्ति नदिएर प्राधिकरणकै अर्को व्यक्तिलाई नि’मित्त दिने सम्भावना पनि छ । तर, कुलमानको सम्भावना क’मजोर भएको छ ।
Previous राजधानी काठमाडौँमा, कोठा भाडामा बस्नेहरुलाईआयो ठुलो। खुसीको खबर पुरा हेर्नुहोस १ सेयर गरौ।
Next कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी